चीन र इटालीका घटनाबाट सिक्नैपर्ने पाठ : लक्षण नै नदेखिइकन पनि कोरोनाको संक्रमण सर्न सक्छ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
चीन र इटालीका घटनाबाट सिक्नैपर्ने पाठ : लक्षण नै नदेखिइकन पनि कोरोनाको संक्रमण सर्न सक्छ !
ख्याल गर्नैपर्ने कुरा के हो भने कोरोनाको लक्षण नै नदेखिइकन वा सामान्य लक्षण देखिएका मानिसहरुबाट पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ । वास्तवमा, त्यस्ता मानिसहरुको माथिल्लो स्वासप्रस्वास नलीमा कोरोनाभाइरसको लोड धेरै बढी हुन सक्छ । उनीहरुले हाँच्छिउँ गर्दा, खोक्दा, थुक्दा, आफ्ना मुख वा नाकहरु छोएर कुनै पनि बस्तुको सतह छुँदा पनि भाइरस सारिरहेको हुन सक्छ । कतिसम्म भने उनीहरुले माथिका केही कुरा नगरिकन मानिसहरुसँग कुराकानी गरिरहँदा पनि अन्य मानिसमा भाइरसको संक्रमण सारिहेको पनि हुन सक्छ ।
अहिलेसम्मको मान्यताअनुसार कोभिड–१९ (SARS-CoV-19) को लक्षण नै नदेखाइकन हुर्कने र बृद्धि हुने समय (incubation period)२ देखि १४ दिनसम्म हुने कुरा रहेको छ । यो भाइरसको संक्रमणले भेट्याएको मानिसहरुमध्ये आधाजसोमा ६ दिनभित्र वा त्योभन्दा अघि नै लक्षणहरु देखापर्न थाल्छन् । तर बाँकीलाई धेरैलाई अत्यन्तै सामान्य खालका वा लक्षण नै नदेखिने पनि हुन सक्छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, वैशाख ३ २०७७ १८:१४:४१